RV IDFP mpamatsy (615250-02-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / IDFP
Rating: Sokajy: Vokatry ny vinaingitra Tags: Buy IDFP, IDFP, IDFP for sale, IDFP mpamatsy
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny filaharan'ny IDFP (615250-02-7), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
IDFP dia ny fikambanana organophosphor izay manakana ny MAGL sy FAAH amin'ny sanda IC50 amin'ny 0.8 sy 3 nM .1 Ao amin'ny 10 mg / kg, ny IDFP dia manandratra ny haavon'ny 2-AG sy ny AEA mihoatra ny 10-fold, ary mampihena ny asehon'ny arachidonya amin'ny ambaratonga mitovy. Ny endocannabinoïde, 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) sy arachidonoyl ethanolamide (AEA), dia lipidin'ny biôlôjika izay mifehy ny asan'ny neurologique sy metabolika samihafa amin'ny fampidirana ireo mpitsabo cannabinoid, cannabinoid central (CB1) sy cannabinoid peripheral (CB2). Ny monoacylglycerol lipase (MAGL) sy ny asidra amidehydrolase (FAAH) dia mamolavola ny 2-AG sy ny AEA, ka mamaritra ny asany biolojika.
I.IDFP ireo karazana fototra:
Meny fitetezana 294.391
II. Cycle IDFP
Famaritana an-tsoratra: ISOPROPYL DODECYLFLUOROPHOSPHONATE
2. IDFP Usage:
IDFP dia fikambanana organofosphorosa mifandraika amin'ny mpikaroka nerve sarin. Toy ny sarin, IDFP dia singa tsy azo havaozina ho an'ny andiam-bibikely samihafa izay ampiasaina amin'ny famongorana ny neurotransmitters, na izany aza, ny longan'ny alkyl ao IDFP dia mahatonga azy ho malemy kokoa noho ny inhibitor of acetylcholinesterase (AChE), miaraka amin'ny IC50 amin'ny 6300nM irery ihany Ny tandrok'omby dia ny fihinanana tsiranoka roa amin'ny monosacylglycerol lipase (MAGL), ny antibiotika voalohany izay manimba ny endocannabinoïde 2-arachidonoylglycerol (2-AG), ary ny asidra foly amidhy hydrolase (FAAH), ny antibiotika voalohany izay manimba ny anandamide endocannabinoid . Ny IC50 amin'ny IDFP dia 0.8nM ao MAGL, ary 3.0nM ao FAAH. Ny fihanaky ireo enzymes roa ireo dia mitombo avo roa heny amin'ny anandamide sy ny 2-AG ao amin'ny atidoha, ka miteraka fanairana cannabinoid sy ny fihetsika mahazatra cannabinoid ao amin'ny fianarana biby, ary ny tsy fahampian'ny hery ao AChE dia midika fa tsy misy soritr'aretin'ny cholinergika [1 ]    Na dia eo aza ny rafitra simika toy izany amin'ny mpitrandraka voarara, ny longozy alkylin'ny IDFP dia mahatonga azy ho latsaka ivelan'ny famaritana ny "zavatra simika misy poizina" ao amin'ny Fifanarahana momba ny fiadiana ny fiadiana amina fiadiana,  ary hatramin'ny Tsy mampiseho ny fihenan'ny AChE mahery fihetsika mifandray amin'ny organophosphor, koa ny IDFP dia tsy iharan'ny fanaraha-maso henjana araka ny lalàna.
3. Inona ny dosage amin'ny IDFP?
Ho an'ny tahiry maharitra, manoro hevitra isika fa ny IDFP dia ho tahiry aseho amin'ny -20 ℃. Tokony hiorina mandritra ny herintaona fara fahakeliny.
Ny IDFP dia natolotra ho vahaolana amin'ny acetate methyl. Raha hanova ny solvent dia alefaso fotsiny ny acetate methyl ao anaty ranon-tsakafo mangatsiaka ary ampio avy hatrany ny solvento ny safidy. Azo ampiasaina ny solvents toy ny ethanol, DMSO, ary ny formamide dimethyl ao anaty gas ao anaty. Ny tsy fahampian'ny IDFP ao amin'ireto solvent ireto dia manodidina 10mg / ml.
Raha ilaina amin'ny vahaolana biôlôjika ny vahaolana azo avy amin'ny tahiry, dia afaka manomana tsara azy ireo amin'ny alalan'ny fanamafisana ny solvent organika ho potipoti-boankazo na isotônika. Azonao ametrahana fa tsy misy lanjany ny fatran'ny organiquesolvent, satria mety hiteraka fiantraikany ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny vahaolana ambany izany. Tsy mamporisika ny fametrahana ny vahaolana amin'ny rano mandritra ny andro maromaro.
4.How miasa IDFP?
Ny IDFP dia singa tsy azo havaozina ho an'ny andiam-biby maro samihafa izay ampiasaina amin'ny famongorana ny neurotransmitters, saingy ny longan'ny alkyl ao IDFP dia mihamalemy kokoa noho ny inhibitor of acetylcholinesterase (AChE), raha toa kosa izy io dia singa manan-kery ho an'ny enzymes monoacylglycerol lipase ( MAGL), ny biby enzymika tompon'andraikitra amin'ny fanimbazimbana ny endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG), ary ny asidra asid amidhy hydrolase (FAAH), ny biby enzyma izay manimba ny anandamide mainendocannabinoid hafa. Ny fikambanana organophosphor izay manakana ny MAGL sy FAAH amin'ny sanda IC50 amin'ny 0.8 sy 3 nM .1 Ao amin'ny 10 mg / kg, ny IDFP dia manandratra avo kokoa ny ati-dohan'ny 2-AG sy ny AEA mihoatra ny 10-fold, ary mampihena ny asidra arachidony amin'ny 10-heny.
Ity vokatra ity dia tsy natao ho an'ny fampiasan'ny olona na ny veterinary, fa ny fampitandremana misimisy dia mbola eo amin'ny fikarohana. Aza avela hifandray mivantana amin'ny hoditra, ny maso, ny tracteur respiratoire, ny tsy fahamendrehana, miantsoa avy hatrany ny dokotera.
6.IDFP Powd Powder:
7.IDFP Fofona ronono voadona:
9. Moa ve misy fiantraikany amin'ny ADFP ny IDFP?
Ny medulla renena, izay heverina ho fanakianana ny fanaraha-maso ny sira sy ny fandanjana rano sy ny fifehezana maharitra amin'ny tosidra, dia nanan-karena amin'ny anandamide sy ny roa amin'ireo karazan-ketsa goavambe misy azy, cyclooxygenase-2 (COX-2) ary ny asidra asid amidhy hydrolase (FAAH) . Ny fampidirana ny anandamide (15, 30, ary 60 nmol · min-1 · kg-1) ao amin'ny medulla renena amin'ny mozika C57BL / 6J dia nanentana ny fivoahana diuresis sy sira amin'ny COX-2- fa tsy miankina COX-1 miankina. Mba hahalalana raha mety hiteraka fahavoazana toy izany ny endocannabinoïd endogencinoid ao amin'ny renial medulla, dia nodinihina ny vokatr'ilay fluorophosphate dodecyl dodecyl (IDFP), izay manakana ny two hydrolase endocannabinoid roa. Ny fitsaboana IDFP dia nampitombo ny tahan'ny fitombon'ny urine sy ny fandroahana amin'ny natiora amin'ny COX-2- fa tsy miankina COX-1 miankina. Na ny anandamide na ny IDFP no voakasika amin'ny taham-pahafatesan'ny glomerular. Tsy misy rafitra (0.625 mg · kg-1 · 30 min-1 iv) na intramedullary (15 nmol · min-1 · kg-1 · 30 min-1) IDFP efa mialoha ny anandamide intramedullary (15-30 nmol · min-1 kg-1) ny voka-dratsin'ny fanafody anandamida, izay manoro hevitra fa tsy ilaina ny fitsaboana ny anandamida amin'ny diérose. Ny Intramedullary IDFP dia tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fikorianan-drà tao amin'ny renial fa nanentana ny rà mandriaka. Ny vokatry ny IDFP momba ny fatran'ny urine sy ny fampidiran-dra ny meday dia ny FAAH-miankina amin'ny fampisehoana amin'ny fampiasana ny totozin'ny FAAH knockout. Ny fanadihadiana momba ny tazo voajanahary PGE2 amin'ny HPLC-electrospray ionization ny tandem mass spectrometry dia mampiseho fa ny fitsaboana IDFP dia nampihena ny PGE2 urine. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mifanaraka amin'ny anjara asan'ny FAAH sy ny anandamide endogenid izay miasa amin'ny metabolita COX-2-miankina amin'ny fitantanana diurenis sy solo-sira ao amin'ny mousekidney.
IV. Ahoana no hividianana IDFP avy any AASraw?
Aoka ho voalohany ny handinika ny "IDFP" hanafoana ny valin-
Tsy maintsy ho tafiditra ao amin'ny mba handefasana famerenana.
Naltrexone HCL poids
Nootropics vovoka (16)
Anabolika Steroids (47)
Nandrolone Poids Series (8)
Fampiasan'ny lehilahy (4)
Vokatry ny vinaingitra (32)
Ny hafa (16)
Fanamarihana momba ny Oxymetholone: ​​Ny toro-làlana farany amin'ny Oxymetholone (Anadrol)
The Top 10 esterter testosterone: inona no mety aminao?
Ny Torolalana Manonitra ny Nandrolone Ester (DECA Durabolin)
Otilia on Cetilistat (Oblean) poeta
Alissa on Trenbolone Acetate (Tren ace) poeta
Tabita on Oxandrolone (Anavar) poopy
Earle on Cetilistat (Oblean) poeta
Arlie on Tadalafila (Levitra)
Lorenza on Testosterone vovoka
Margery on Cetilistat (Oblean) poeta
Patricia on Testosterone vovoka
RAD140 (Testolone) vovoka
Oxandrolone (Anavar) poopy
Levothyroxine (T4) vovoka
naoty 3.33 avy tany 5